के आकाशमा उड्दै गरेको चराले तपाईंलाई दिशा गर्दिएको छ ? शुभ कि अशुभ जान्नुहोस् – News Nepali Dainik
के आकाशमा उड्दै गरेको चराले तपाईंलाई दिशा गर्दिएको छ ? शुभ कि अशुभ जान्नुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०३, २०७७ समय: १६:२०:१६
शरीरमा परेको पंक्षीको दिसा शुभ होला कि अशुभ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार उडिरहेको चराले मानिसको जिउमा दिशा गर्नुलाई शुभ संकेत मान्ने गरिन्छ ।
Last Updated on: February 15th, 2021 at 4:20 pm
३५५६ पटक हेरिएको